Eziokwu germination mgbọrọgwụ okpokoro ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ọkachamara nke ọgwụ Germination Heat Mat,Okpokorita Okpukpo Okpokoro,Ọkachamara Germination Root Growth Heat Mat
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > N&#39;okpuru kpo akwa tank > Eziokwu germination mgbọrọgwụ okpokoro ọkụ
Eziokwu germination mgbọrọgwụ okpokoro ọkụ
Ihe Nlereanya.: F034-7
Size: Small, 200*450mm
Ubu oke: 2000pcs/shift
Oge na-eto eto na-eto eto na-ekpo ọkụ ma na-agba ọsọ ha.
Nnyocha achọpụtala na osisi ndị nwere mpaghara mgbọrọgwụ nke na-ekpo ọkụ ma na-agbasa na ngwa ngwa karịa osisi ndị na-adịghị. Nanị tinye Mkpụrụ Igwe Mmiri nke Mkpụrụ ahụ n'elu ala dị larịị, na-ekpo ọkụ n'okpuru ebe a na-amị mkpụrụ ma gbanye eriri n'ime eriri 120 V. Maka nsonaazụ kachasị mma, jiri dome gbasaa n'elu belt seedling ma na-edebe ya n'okpuru ọkụ T5 ọkụ ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi ọkụ. Mmiri anyanwụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ dị elu pụrụ ịdị oke ọkụ maka seedlings.
Gburu mgbọrọgwụ nke ebe 10-20 n'elu ụlọ okpomọkụ
Ntupụta akwụkwọ na-agba ume ka mgbọrọgwụ siri ike
Na-adaba na ntanye n'okpuru ọkpọ mkpụrụ osisi
Akwa mma, ụlọ mmiri na-eguzogide ọgwụ
Nwere ike jiri ya na thermostat dakọtara maka njikwa okpomọkụ
Isi ihe: PVC
size: 100 * 178mm, ahaziri dị
elekere: 4w, ahaziri aha
voltage: 120v, ahaziri dị
Max okpomọkụ: 42 ℃
agba: nwa, ahaziri
oge ndu: ụbọchị 30
a) Maka usoro nlele, anyị na-eji ozi dịka DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, onye ahịa nwekwara ike itinye onye ozi ahụ.
b) Maka usoro buru ibu, anyị nwere ike iji ozi ma ọ bụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ndị ọzọ na-ebugharị pụrụ iche.
c) Ndị ahịa nwekwara ike ikenye onye na-ebugharị njem iji mee njem.
1, Ịkwụ Ụgwọ: TT, Western Union, Paypal, L / C.
2, Enwere ike inye ihe nlele.
3, A na-ekwu maka mbupu ụgbọ ibu n'okpuru arịrịọ gị.
4, n'ọdụ ụgbọ mmiri: Shenzhen, China.
5, A na-enye ego maka ego gị.
Shenzhen Xinghongchang Electric Co., Ltd e wuru na 1996, bụ ọkachamara na-emepụta ihe ọkụkụ dị na Huizhou. Na ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ nke ịmepụta ihe ọkụkụ, anyị pụrụ iche na ubi nke ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ na kpụ ọkụ n'ọnụ maka anụ ụlọ na anụ ụlọ, na-eduga ọhụrụ ume ike nke usoro kpo oku.
Anyị na ndị ọrụ R & D anyị na ụlọ ọrụ ọkachamara, anyị na-enwe ike ịmepụta, mbupụ ma nye ndị ahịa anyị ezigbo mma nke ikpo ọkụ infrared. Anyị nwetara akwụkwọ ikikere na BV, ISO9001 / 14001 / 18000.And Ngwaahịa anyị enweela nkwenye nke CE, RoHS , Ul, ETL, wdg.
N'ihe dị elu na ịsọ mpi nke XHC ngwaahịa anyị na-eme ka anyị bụrụ onye ha na ya na-akpachi anya nke ndị na-ere ngwaahịa, dịka, Samsung, LG, Simfer, Kohler, Panasonic, BROAN, wdg.
Anyị dị 100% njikere na-adọrọ mmasị na-etolite na onye ọ bụla ahịa ọnụ.
Ngwaahịa : Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > N'okpuru kpo akwa tank
Na-egwusi egwu maka ihe ndina maka obere obere Kpọtụrụ ugbu a
Ekwesịrị Ekwenye na Ọkwá Dị Elu Kpọtụrụ ugbu a
UL Kwadobere Pet Heat Mat maka USA Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ikuku carbon kpụ ọkụ n'ọnụ na-ekpo ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkiri na-agbanwe agbanwe ahaziri eletrik PET Ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ Mat Kpọtụrụ ugbu a
Ihe kachasị mma Amazon kacha mma Kpọtụrụ ugbu a
Ihe na-eme ka ụmụaka nweta ihe nkiri 16w Carbon heat Mat Kpọtụrụ ugbu a
UL N'èzí 120V4W Na-emepụta Ngwongwo Nkịtị Kpọtụrụ ugbu a
Ọkachamara nke ọgwụ Germination Heat Mat Okpokorita Okpukpo Okpokoro Ọkachamara Germination Root Growth Heat Mat Ọnụ ọgụgụ dị elu nke Germination Mkpụrụ Mkpụrụ Germination Nkume na-ekpo ọkụ na Cat Ụlọ ọrụ Sauna Heater Panel Mkpụrụ osisi germination gerling